Inona avy ireo lambam-pandriana mampahazo aina indrindra?
Inona no fitaovana ampiasainay?
Inona no fitaovana ampiasaina amin'ny lambam-pandriana kalitao? Tsy maintsy voajanahary, mateza ary azo antoka ho an'ny fahasalamana. Fampiasana lamba firakotra sy lambam-baravarana:
microfiber malefaka sy maharitra;
lamba volotsangana malefaka mirentirenty;
100% landihazo voajanahary.
Microfiber lambam-pandriana mihaja dia tsara ho an'ny olona voan'ny allergie na tsy fahazakana isan-karazany ary tsara ihany koa amin'ny vanim-potoana mangatsiaka satria mafana tsara sy manome rivotra mivezivezy tsara. Ity fitaovana ity dia mahatohitra ny fananganana pilina, puffs, tsy miketrona, ary mitazona endrika tsara mandritra ny fotoana maharitra. Ny lambam-pandriana volotsangana dia manify, malama toy ny landy, mitroka tsara ny hamandoana, mifoka rivotra ary tsara tarehy. Ny lambam-pandriana vita amin'ity fitaovana ity dia mety amin'ny ankizy. Ny lamba vita amin'ny landihazo dia tsara ho an'ny fampiasana isan'andro, ho an'ny hoditra ary mateza.
Flannel lamba firakotra
Ny flannel dia iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra amin'ny lambam-pandriana. Tombontsoa amin'ny ravin-flannel:
vita amin'ny akora voajanahary;
hypoallergenic, tsy manangona vovoka, ary tsy mahatonga mahazaka fanehoan-kevitra;
mitroka tsara ny hamandoana sy ny hatsembohana;
mahatohitra ary haharitra mandritra ny taona maro miaraka amin'ny fikarakarana tsara;
cozy sy mahafinaritra ny hoditra.
Na izany aza, misy ny tsy fahampiana ny flannel. Tokony hosasana amin`ny mari-pana ambany mba hisorohana ny fiketrahana sy ny deformation ny lamba. Maina ela ny flannel. Tsy dia manakiana loatra izany rehefa avy nosasana, fa tsara kokoa ny mamela ny fandriana tsy misaron-doha mandra-pahafatin'ny lamba. Esory ny tasy amin'ny lambam-pandriana flannel alohan'ny hanasana milina; fa raha tsy izany dia hitoetra mandrakizay izy.
Tolo-kevitra ankapobeny momba ny fikarakarana fandriana
Tokony hosasana foana ny lambam-pandriana alohan'ny hampiasana azy voalohany; izany dia hanadio, hanitsy ny loko, ary hanalefaka ny lamba. Atsofohy ao anatiny ny saron-drongony sy ny fonon-ondana mba hanadiovana ny zorony amin'ny vovoka. Apetraho ao anatin'ny saron'ny lamba firakotra ny lamba ary hidio ny zipper na bokotra. Sasao misaraka amin'ny fotsy ny lamba firakotra. Jereo ny mari-pana amin'ny fanasana. Ireo fitsipika tsotra ireo dia hanampy anao hanitatra ny fiainan'ny fandrianao. Linens sy Hutch dia maniry anao hanonofy mahafinaritra amin'ny lambam-pandriana malefaka sy mahazo aina.
More on: Bamboo
Ahoana no hampiroboroboana ny pejinao ao amin'ny Instagram nefa tsy mandany vola be amin'ny mpitantana SMM?
Previous Fandalinana Harvard: 'Effet secondaire' ny vaksiny COVID-19 no ao an-tsainao
Manaraka Didy Ofisialy Vaovao any Rwanda miaraka amin'ny Fikambanana mpiaro ny bibidia